कहिले पाउलान सञ्चार उद्यमी धितालले न्याय ? | Indrenionline.com
कहिले पाउलान सञ्चार उद्यमी धितालले न्याय ?
दाङ, ७ साउन । दाङका सञ्चार उद्यमी देविप्रसाद धिताल (हेमराज) को हत्या भएको ११ वर्ष भएको छ ।
२०६७ साल साउन ६ गते तत्कालिन उरहरी गाविस वडा नम्वर ४ हेमनगरमा धिताललाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो । तुलसीपुर–६ हेमनरका हेमराजको हत्यारा पत्ता लगाउन हत्या भएको ११ वर्ष बिति सक्दासम्म पनि प्रहरी÷प्रशासनले चासो दिएको छैन ।
गोली लागि गम्भीर घाइते धिताललाई उपचारका लागि नेपाली सेनाको १९ नम्वर बाहिनीमा ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको थियो । हत्यापछि उनका हत्याराको खोजी भईरहेको प्रहरीले अहिले पनि दाबी गरिरहेको छ तर उपलब्धि भने शुन्यजस्तै छ प्रदेश टुडेमा खबर छ। प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको भनिए पनि देविप्रसाद धिताल हेमराज प्रतिष्ठानले हत्यामा संलग्न अपराधिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन दवाव दिन अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
Previous: ओलीको माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिने चिट्ठा
Next: लगाएको मास्कभित्र प्रहरीले ब्राउन सुगर फेला पार्यो